Eco Resort Cermenza-Villa Bouquet - I-Airbnb
Eco Resort Cermenza-Villa Bouquet
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguNemanja
I-Eco Resort Cermeniza ikwindawo enye yezona ndawo zintle kakhulu kwingingqi yaseCrmnica enombono wepanoramic weSkadar Lake. Resort yethu yahlulwe 6 Villas ezintle, kunye pool, indawo yokuzonwabisa kunye yokupaka free iindwendwe. Ngaphakathi kweResort eyi-5000 sq m, abakhenkethi banokuyonwabela iminyaka yethu engamakhulu amabini eediliya kunye nokungcamla kwewayini kwindawo yethu yewayini.
I-Villa Bouquet ine-45 sq yeemitha, ibhedi ephindwe kabini, ibhedi yesofa, igumbi lokuhlala, ikhitshi elinetafile yokutyela kunye negumbi lokuhlambela labucala.
Sikunika ukuba ukonwabele ubuhle bechibi le-Skadar ngokuzola kwe-Villa Bouquet yethu, ukuhamba ngenqanawa okanye ukukhwela inqanawa, ukuhamba ngeenyawo, ukubukela iintaka, ukhenketho lwebhayisekile, okanye ukuphumla ecaleni kwedama, ulinde ukuba ilanga litshone emva kweenduli. Udibaniso lwamaplanga kunye nelitye luyilo lwemveli lwe-montenegrin, ngoko ke i-Villal yethu, idibanisa yanamhlanje kunye neyemveli, ibonisa ukufudumala, kwaye ikunika imvakalelo yoxolo kunye nokuzola.
Yonke ivilla inekhitshi yayo, ngoko ke unakho ukuzenzela isidlo sakho. Emva kosuku olude lokuphonononga ubuhle bechibi, ukuba unomdla, sinokukunika intshulube kunye nesidlo sangokuhlwa esimnandi kunye neemveliso ezingcono kakhulu ezinokunikelwa yiMontenegro, kwaye sinokusebenza kwindawo yakho yabucala. Oko kubandakanya, ngokuthe ngqo phambi kwakho okulungisiweyo, i-carp kunye ne-blinq / intlanzi ye-lake fish, kunye ne-ham kunye nesonka samasi, kunye nokunye okuninzi kokutya kwasekhaya.
Indawo yethu yokuphumla ineyona ndawo ilungileyo kwiChibi laseSkadar. Sikwiikhilomitha ezingama-20 kuphela ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya sasePodgorica, iikhilomitha ezingama-24 ukusuka kwisixeko esikufutshane elunxwemeni lolwandle - iBar, i-1.4 km kude neVirpazar - iziko labakhenkethi bechibi. Le ndawo ilungele ukutyelela bonke ubuhle be-Skadar Lake, kwaye ilungile ukuba ufuna ukutyelela iMontenegro ngokwakho. Isikhululo sebhasi kunye nesikhululo sikaloliwe singaphantsi kweekhilomitha ezi-2.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Virpazar